Kufanana 16.5 ikozvino kunoenderana neApple Silicon uye iri kukurumidza zvakanyanya | Ndinobva mac
Kufanana 16.5 kwatove kutsigira Apple Silicon uye inokurumidza zvikuru
Isu tinoenderera mberi nezvirongwa zviri kuve zvinoenderana neiyo nyowani Apple processor. NaApple Silicon iyo shanduko yakauya kumaMacs ekambani uye zvishoma nezvishoma vagadziri vacho vari kuita kuti zvishandiso zvavo zvienderane neiyi processor uye neiyo M1 chip. Kuyedza kwagara kuchiratidza kuti processor iyi inoita kuti komputa ikurumidze, kuchengeteka uye kushanda zvakanaka. Iye zvino inguva yakafanana ne16.5
Vashandisi veMac M1 ikozvino vane nzira nyowani yekugadzirisa windows pamachina avo. Yakavhurwa zviri pamutemo Kufananidza 16.5 nerutsigiro rwemuno rweApple Silicon, kubvumira vashandisi kumhanya windows 10 ARM Insider Preview pane M1 macs. Hapana chikonzero chekushandisa Rosetta.
Pakatangwa beta vhezheni, zviuru zvevashandisi zvakaedza kunaka kwayo kutsva uyezve mhedzisiro yacho yaisakwanisa kuve nani Mutevedzeri weMutungamiri weUinjiniya uye Rutsigiro, Nick Dobrovolskiy akati:
Isu takagamuchira ratidziro dzesviro pamusoro pekuita kunoshamisa kweese ari maviri tekinoroji yekutarisa ye Kufananidza 16.5 kweM1 Mac uye Windows 10 pane ARM Insider Preview senge x86 maapplication nemitambo, kusanganisira Rocket League, Pakati Pedu, Roblox, Vakuru Mipumburu V: Skyrim, Sam & Max Chengetedza Nyika nevamwe vazhinji. Iwo ma testers akada echirongwa zviri nyore kushandisa maficha uye seamless Windows kusangana neMacOS Big Sur, kuwedzera kugadzirwa.
Zvinoenderana nemiyedzo, zviri kusvika 30% nekukurumidza kupfuura iyo yapfuura vhezheni yakashandiswa muIntel processor, asi zvakare zvinodikanwa kuti utarise kunatsiridza kunotevera:
250 muzana mashoma simba anoshandiswa: Pane Mac ine Apple M1 chip, Parallels Desktop 16.5 inoshandisa simba rakapetwa ka2,5 pane 2020 Intel-based MacBook Air.
Kusvika pamakumi matanhatu muzana zvirinani mashandiro eDirectX 60: Kufananidza Desktop 16.5 inomhanya paM1 Mac inopa kusvika makumi matanhatu muzana zviri nani DirectX 60 mashandiro pane Intel-based MacBook Pro ine Radeon Pro 11X GPUs.
Kusvika pamakumi matatu muzana zvirinani mashini mashandiro emuchina (Windows): Kumhanya a Windows 10 muchina muARM Insider Wakatarisa pane Kufananidza Desktop 16.5 pane M1 Mac inoita kusvika makumi matatu muzana zvirinani pane a Windows 30 muchina unomhanya paIntel-based MacBook Pro ine Intel Core i10 processor.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Kufanana 16.5 kwatove kutsigira Apple Silicon uye inokurumidza zvikuru
KuApple vanopemberera Zuva rePasi nekupa $ 1 pakutenga kwega kwega neApple Pay